IdathaRobot: Ipulatifomu Yokufunda Yomshini Okuzenzakalelayo | Martech Zone
IdathaRobot: Ipulatifomu Yokufunda Yomshini Okuzenzakalelayo
NgoLwesibili, Okthoba 24, 2017 NgoLwesibili, Okthoba 24, 2017 Douglas Karr
Eminyakeni edlule, bekufanele ngenze ukuhlaziywa okukhulu kwezezimali ukuze inkampani yami ibone ukuthi ukunyuka kwamaholo kungayinciphisa yini imali yabasebenzi, izindleko zokuqeqesha, ukukhiqiza, kanye nokuziphatha ngokuphelele kwabasebenzi. Ngikhumbula ngisebenzisa futhi ngihlola amamodeli amaningi amasonto, konke ngiphetha ngokuthi kuzoba nokonga. UMqondisi wami wayengumfana ongakholeki futhi wangicela ukuthi ngibuyele emuva ngiyobahlola futhi ngaphambi kokuthi sinqume ukukhokhela abasebenzi abangamakhulu ambalwa. Ngabuya ngabuyisa izinombolo futhi… ngemiphumela efanayo.
Ngihambise uMqondisi wami ngamamodeli. Wabheka phezulu wabuza, “Ungabheja umsebenzi wakho kulokhu?”… Wayezimisele. "Yebo." Sibe sesikhuphula umholo omncane wabasebenzi bethu futhi nokonga izindleko kwaphindeka kabili ngokuhamba konyaka. Amamodeli ami abikezela impendulo eyiyo, kepha ayesekude kakhulu nomthelela jikelele. Ngaleso sikhathi, lokho kwaba okungcono kakhulu engingakwenza ukunikezwa kweMicrosoft Access ne-Excel.
Ukube benginamandla wekhompyutha namandla okufunda ngomshini abekhona namuhla, bengizothola impendulo ngemizuzwana, nokubikezela okunembile kokonga izindleko ngephutha elincane. IdathaRobot bekungeke kube yisimangaliso.
IdathaRobot isebenzisa yonke imodeli yempilo, yenza abasebenzisi bakwazi ukwakha amamodeli wokuqagela anembile futhi kalula. Okuwukuphela kwezithako ezidingekayo ilukuluku nedatha - amakhono okufaka amakhodi nokufunda ngomshini angakhethwa ngokuphelele!
IDathaRobot iyipulatifomu yabafundi beDatha Yesayensi, Abahlaziyi bebhizinisi, Ososayensi beDatha, Abaphathi, Abanjiniyela beSoftware, kanye nochwepheshe be-IT ukudala, ukuhlola, nokwenza ngcono amamodeli wedatha ngokushesha futhi kalula. Nayi ividiyo yokubuka konke:
Inqubo yokusebenzisa iDataRobot ilula:
Faka imininingwane yakho
Khetha ukuguquguquka kwethagethi
Yakha amamodeli amamodeli ngokuchofoza okukodwa
Hlola amamodeli aphezulu futhi uthole imininingwane
Sebenzisa imodeli enhle kakhulu futhi wenze ukubikezela
Ngokuya ngeDathaRobot, izinzuzo zabo zifaka phakathi:
Ukunemba - Ngenkathi i-automation nejubane kuvame ukuza ngezinga lekhwalithi, iDataRobot idiliva ngokukhethekile kuwo wonke lawo mazinga. I-DataRobot isesha ngokuzenzakalela ngezigidi zenhlanganisela yama-algorithms, izinyathelo zokulungiswa kwedatha, ukuguqulwa, izici, namapharamitha wokuhlela wemodeli engcono kakhulu yokufunda ngomshini yedatha yakho. Imodeli ngayinye ihlukile - ilungiswe kahle kudathasethi ethile nokuqondiwe kokubikezela.
Speed - I-DataRobot ifaka injini yokumodela ehambisanayo engafinyelela kumakhulu noma izinkulungwane zamaseva anamandla wokuhlola, ukwakha nokuguqula amamodeli wokufunda womshini. Amasethi edatha amakhulu? Amasethi edatha abanzi? Ayikho inkinga. Ijubane nokukwazi ukumodela kukhawulelwe kuphela ngezinsizakusebenza zekhompiyutha ezilahlwa yiDathaRobot. Ngawo wonke la mandla, umsebenzi owawuthatha izinyanga manje usuphelile ngamahora nje.
Ukusebenziseka kalula - I-interface enembile esekwe kuwebhu ivumela noma ngubani ukuthi ahlanganyele nepulatifomu enamandla kakhulu, kungakhathalekile ileveli yamakhono nekhono lokufunda ngomshini. Abasebenzisi bangadonsela phansi bese bevumela i-DataRobot yenze wonke umsebenzi noma bangabhala amamodeli wabo wokuhlolwa yipulatifomu. Ukubukwa okwakhelwe ngaphakathi, okufana neModeli X-Ray ne-Feature Impact, kunikeza imininingwane ejulile nokuqonda okusha kwebhizinisi lakho.
Isimo semvelo - Ukuhambisana nesimo semvelo esikhulayo sokufunda komshini akukaze kube lula kanjena. IDathaRobot ihlala ikhulisa isethi yayo enkulu yama-algorithms ahlukahlukene, aphambili kakhulu avela ku-R, Python, H20, Spark, neminye imithombo, enikeza abasebenzisi isethi engcono kakhulu yamathuluzi we-analytics wezinselelo zokubikezela. Ngokuchofoza okulula kwenkinobho yokuqala, abasebenzisi bangasebenzisa amasu abangakaze bawasebenzise ngaphambili noma okungenzeka bangawazi.
Ukuthunyelwa Ngokushesha - Izinhlobo ezinhle kakhulu zokubikezela azinanani elincane lezinhlangano ngaphandle kokuthi zisebenze ngokushesha ngaphakathi kwebhizinisi. NgeDathaRobot, ukuthumela amamodeli ezibikezelo kungenziwa ngokuchofoza amagundane ambalwa. Akugcini lapho, yonke imodeli eyakhiwe yiDathaRobot ishicilela indawo yokugcina ye-REST API, ikwenze kube nomoya ococekile wokuhlanganisa ngaphakathi kwezinhlelo zebhizinisi zesimanje. Izinhlangano manje sezingathola inani lebhizinisi ekufundeni komshini ngemizuzu, esikhundleni sokulinda izinyanga ukubhala ikhodi yokushaya amaphuzu nokubhekana nengqalasizinda engaphansi.
Ibhizinisi-Ibanga - Manje lokho kufunda komshini kunomthelela kwinani elikhulayo lezinqubo zebhizinisi, akusekho okokukhetha ukulithatha njengethuluzi lonjiniyela elinokuphepha okuncane, ubumfihlo nokuvikelwa kokuqhubeka kwebhizinisi. Empeleni, kubalulekile ukuthi ipulatifomu yokwakha nokuthumela amamodeli yenziwe lukhuni, ithembeke futhi ihlangane kahle nohlelo lwezemvelo lobuchwepheshe enhlanganweni.
Hlela iDemo Ebukhoma yeDathaRobot
Tags: aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaimishini yokufunda ezenzakalelayoukungeniswa kwedathaukucubungula idathaidatha yesayensiukubonwa kwedathaidatharobotamasethi edathaumthelela wesicih2oamasethi edatha amakhuluukufunda imishiniimodeli x-rayinjini yokumodelasibikezeloPythonrSpark